Require Sample Amount (M,C) - Food and Drug Administration, Myanmar
Require Sample Amount (M,C)
ပေးပို့ရမည့် အစားအသောက်နမူနာပမာဏ (Laboratory Sample Only)
Minimum NO./Amount of Sample Submitted for
Fats & Oil (& Related Products) Edible Oil 200ml/bot 1 Litre/bot 1.2Litre
Margarine, Shortening Butter Oil (Substiturte) 200g 500g 700g
Milk & Milk Products Milk Powder, Whey Powder (any Powder Form) 200g 500g 700g
Milk Drink & Yogurt (any Liquid Form) 200ml 500ml 700ml
Cheese (any solid & Semi-Solid Form) 200g 500g 700g
Fruits & Vegetables Products Processed/Semi –Processed/ Canned/Frozen 200g 500g 700g
Meat & Fish Products Processed/Semi-Processed/ Canned/Frozen 200g 500g 700g
Beverages and Bottle Water Soft Drinks /Alcoholic Beverages/Fruit Juice/Cold Drinks/Energy Drink/Cereal Drink /Sport Drink/ 1Litre for BDW 200ml for others 2000ml for BDW 500ml for others 3Litre forBDW 700ml for others
Bakery and Confectionery Products Biscuits/Bread/Cakes/Cracker/Snack/ Chocolate/Candies etc. 200g 500g 700g
Miscellaneous Ready –to-eat Products (Instant Coffee Mix/Noodles/Cereals/Powder Drink Mix etc. 200g 500g 700g
Food Supplement (Dietary Supplement) Pharmaceutical and Non-pharmaceutical Presentations of Supplement 200g 500g 400g
Food Additives Various kinds of Food Additives Liquid form;200ml Semi-Solid, Powder and Solid form 200g Liquid form;500ml Semi-Solid, Powder and Solid form; 500g Liquid form;700ml Semi-Solid, Powder and Solid form; 700g
မှတ်ချက် (၁)။ ဖော်ပြပါနမူနာများသည် sample unit (1)unit အတွက် အနည်းဆုံး လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပြီး regulation အရ (သို့မဟုတ်) Risk categorization အရ စစ်ဆေးလိုပါက စစ်ဆေး လိုသည့် unit အရေအတွက်ဖြင့် တွက်ချက်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၂)။ ထပ်မံစစ်ဆေးလိုသော (repeat) နမူနာ (သို့) parameter တိုးချဲ့စစ်ဆေးလိုသော နမူနာ (eg: Listeria, Aflatoxin)များအတွက် နမူနာပမာဏ သီးခြားထပ်မံလိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) Original Package ဖြစ်ရမည်။
(၂) Original Package နှင့် မပေးပို့နိုင်ပါက contamination အနည်းဆုံးနည်းဖြင့်လုံခြုံစွာပြောင်း လဲထုပ်ပိုးထားခြင်းဖြစ်နေရပါမည်။
(၄) Kind of food (သို့မဟုတ်) အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းကို သေချာစွာဖော်ပြရမည်။
(၅) Food Additive များအား Specification ‌ေပးရန်။
(၆) လိုအပ်ပါကနမူနာ၏ Specification ပူးတွဲပေးပို့ရမည်။
(၇) အစားအသောက်နမူနာ၏သတ်မှတ်အပူချိန်၌ ထားရှိ၍ပေးပို့ရပါမည်။
(၈) သက်တမ်းလွန်အစားအသောက်နမူနာများအားပေးပို့သူ၏ သဘောတူချက်ဖြင့်သာစစ်ဆေးပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။
← Customer information for Food Sample Analysis
Dumex နို့မှုန့်နှင့်ပတ်သက်၍ စားသုံးသူပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာချက် →